पहाडको न्यानो माया पाउदा मधेशको किन पाएनन् रविराजले ? - Birgunj Sanjalपहाडको न्यानो माया पाउदा मधेशको किन पाएनन् रविराजले ? - Birgunj Sanjalपहाडको न्यानो माया पाउदा मधेशको किन पाएनन् रविराजले ? - Birgunj Sanjal
पहाडको न्यानो माया पाउदा मधेशको किन पाएनन् रविराजले ?
६ आश्विन २०७६, सोमबार २३:५७
काठमाडौं : नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मौलिक सिंगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल लोकस्टार’ मा तराई–मधेशबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका एक मात्र प्रतिस्पधि हुन्, रविराज शाह। उनले यस ‘शो’ मा नेपाली, मैथिलीलगाएत विभिन्न भाषामा गीत गाएर सबैको मन जित्न सफल भइसकेका छन् ।
प्रायः सबै भाषाको गीत गाएर सबैको मन जिते पनि भोट भने कम आउन थालेको छ । नेपाल लोकस्टार सांगीतिक ‘शो’को लागि अब्बल मानिदै आएका उनी पछिल्लो समय भोटको कमीले गर्दा बाहिरिने खतरा बढेको छ ।
मधेशीको शानको रुपमा रहेका रविराज टप ७ मा पुग्न सफल भएपनि खतरा भने झन बढ्दै गएको छ । सधैं भोटले गर्दा अगाडि देखिदै आएका रविराज पछिल्लो समय सबैभन्दा कम भोट ल्याउनेमा परेका छन् ।
मधेशबाट भोटको कमी भएकोले खतरा बढ्दै गएको बुझिएको छ । मधेशको उदयमान गायकको रुपमा चिनाउन मधेशबाट अत्यधिक भोटको आवश्यकता महसुश गरिरहेका बेला मधेशले उनलाई सकेजति भोट गर्न सकेको छैनन् ।
मधेशलाई सधैं तल्लो नजरियाबाट देखिएको समयमा मधेशको गौरव र शानको रुपमा उभिएका रविराजलाई भोटको आवश्यकताले सताएको छ ।
रविराज साहलाई भोटिङ्ग गर्ने तरिका : नेपालका लागि : Type L (space) 01 Send to : 37000 For landline : 166677 And enter voting code : 01 भारतका लागि : Type L (space) 01 Send to : 53010 कतारका लागि : Type L (space) 01 Send to : 92300 साथै, IME Pay App मार्फत् विश्वभरबाट गर्न सकिन्छ ।
तपाइले सोमबार १२ बजेदेखि शुक्रबार १२ बजेसम्म भोट गर्न सक्नुहुनेछ।